Xasan Jabhad: “Mustafa si kasta oo uu u dadaalo … madaxda Dowlad Deegaanka waxaa loo magacaabaa si ay u raalligaliyaan madaxda Addis Ababa” (dhegayso) – Radio Daljir
Xasan Jabhad: “Mustafa si kasta oo uu u dadaalo … madaxda Dowlad Deegaanka waxaa loo magacaabaa si ay u raalligaliyaan madaxda Addis Ababa” (dhegayso)
Febraayo 20, 2019 10:53 g 0
Aqoonyahan Xasan Cabdilaahi Ducaale (Xasan Jabhad) oo ah halgamaa taariikh dheer ku leh noocyadii kala duwanaa ee halgamadii loo soo galay xoraynta Soomaali Galbeed kana soo qaybqaatay welina qayb ka ah ololaha xornimo doonka waxa uu sannadkii 1977 isaga oo 16 jir ah ku biiray Jabhaddii Xoreynta Soomaali Galbeed (WSLF). Xiligaas oo uu ardey ahaa qorigana waa uu qaatay oo halganka ayuu duurka u galay.
Xasan Jabhad oo waraysi dheer siiyey Radio Daljir ayaa walaac ka muujiyey xaalada maanta ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS), waxa uu nala qaybsaday waxyaabaha fashiliya halgan walba oo laga abaabulo dhulkaas cadaawadda guunka ah ee Itoobiya lagu maamulo, iyo waxa ay Itoobiyaanku ka aaminsanyihiin Soomaalida.
Xasan Jabhad waxa uu u warramay wariye Khadar Cawl Ismaaciil.
Hoos ka dhegayso hordhaca qaybta 1aad ee wareysiga asaga oo dhammaystiranna kala soco barnaamijka Martisoor ee maalinka Khamiista.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 379 Wararka 28793
Agaasimaha Madaxtooyada: “DFS mar walba diyaar bay u tahay in ay la kulanto madaxda Somaliland si dalka oo dhan looga hirgaliyo dib-u-heshiisiin dhab ah” (dhegayso)